အေးမြတ်သူ Account ပြန်လိုချင်ရင် Live လွှင့်ပါလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ Hacker အဖွဲ့
16 May 2018 . 3:06 PM
မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်းလှနေတတ်တဲ့၊ သွက်လက်ပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ မင်းသမီးလေး အေးမြတ်သူဟာ လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်နဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာလည်း စကားပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းလို့ လူချစ်လူခင်များတဲ့ မင်းသမီးလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ သူ့ရဲ့ အကောင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Aye Myat Thu Facebook Account ဟာ ဟက်ခံထားရပုံပေါ်ပြီး Cover Photo ကို မေလ ၁၆ ရက် နေ့လည်ပိုင်းကမှ ပြောင်းလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
cover photo ပြောင်းလိုက်စဉ်
Cover Photo ပြောင်းပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အကောင့်ပြန်ယူချင်ရင်လုပ်ရမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေကို Aye Myat Thu Account ကပဲ ခုလို တင်လိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ မင်းသမီး ​အေးမြတ်​သူ
အ​ကောင့်​ကို ပြန်​လာယူနိူင်​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ ဒါ​ပေမဲ့ စည်းကမ်းချက်​​လေး ​တွေ​တော့ လိုက်​နာ​ပေးနိူင်​ရပါ့မယ်​ အများကြီး မဟုတ်​ပါ…
၁ ~~~ ဒီအ​ကောင့်​နဲ့ မင်းသမီး ရဲ့ အ​ကောင့်​တစ်​ခုခုနဲ့ Tag တွဲပီး Live လွင့်​​ပေးနိူင်​ရပါ့မည်​ ဘာလို့လဲ ဆို​တော့ အ​ကောင့်​ပိုင်​ရှင်​ ဟုတ်​မဟုတ်​ သိချင်​လို့ပါ…
၂ ~~~ အ​ကောင့်​ပိုင်​ရှင်​ လက်​တည်းကိုသာ အ​ကောင့်​ပြန်​​ပေးမှာ ဖြစ်​​သော​ကြောင့်​ဖြစ်​ပါသည်​ Tag တွဲပီး Live လွင့်​​ပေးတဲ့ အ​ကောင့်​ကိုသာ လျှင်​ Cb က​နေ ပြန်​လည်း အ​ကောင့်​ပြန်​​ပေးမှာ ဖြစ်​ပါသည်​ !!
စည်းကမ်းချက်​​လေး​တွေ လိုက်​နာ​ပေးဖို့ ​မေတ္တာရပ်​ခံပါသည်​…
မှတ်​ချက်​ ~~~ သူများ အ​ကောင့်​ရဲ့ Chat box ကို ဝင်​ကြည့်​တာ ဝါသနာ မပါ…
အေးမြတ်သူကို ပြောလိုက်တဲ့ စည်းကမ်းချက်များ
ဒီလို အကောင့်အဟက်မခံရခင်မှာ အေးမြတ်သူဟာ သင်္ကြန်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ Shayi ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဟက်ကာတွေ ပြောသလို အေးမြတ်သူအနေနဲ့ Live လွှင့်ပြီး ပြန်ယူမှာလား မယူဘူးလားဆိုတာတော့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာပါ။
Photo Credit : Aye Myat Thu’s Facebook Account
အေးမွတျသူ Account ပွနျလိုခငျြရငျ Live လှငျ့ပါလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ Hacker အဖှဲ့
မွနျမာဝတျစုံလေးတှနေဲ့ အမွဲတမျးလှနတေတျတဲ့၊ သှကျလကျပွီး ကကျြသရရှေိတဲ့ မငျးသမီးလေး အေးမွတျသူဟာ လူမှုကှနျရကျတှပေျေါနဲ့ အငျတာဗြူးတှမှောလညျး စကားပွောဆိုဆကျဆံရေးကောငျးလို့ လူခဈြလူခငျမြားတဲ့ မငျးသမီးလေး ဖွဈပါတယျ။
အခုတော့ သူ့ရဲ့ အကောငျ့တဈခုဖွဈတဲ့ Aye Myat Thu Facebook Account ဟာ ဟကျခံထားရပုံပျေါပွီး Cover Photo ကို မလေ ၁၆ ရကျ နလေ့ညျပိုငျးကမှ ပွောငျးလိုကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
cover photo ပွောငျးလိုကျစဉျ
Cover Photo ပွောငျးပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ အကောငျ့ပွနျယူခငျြရငျလုပျရမယျ့ စညျးကမျးခကျြတှကေို Aye Myat Thu Account ကပဲ ခုလို တငျလိုကျတာ တှရေ့ပါတယျ။
မင်ျဂလာပါ မငျးသမီး အေးမွတျသူ
အကောငျ့ကို ပွနျလာယူနိူငျပါတယျ ခငျဗြာ ဒါပမေဲ့ စညျးကမျးခကျြလေး တှတေော့ လိုကျနာပေးနိူငျရပါ့မယျ အမြားကွီး မဟုတျပါ…
၁ ~~~ ဒီအကောငျ့နဲ့ မငျးသမီး ရဲ့ အကောငျ့တဈခုခုနဲ့ Tag တှဲပီး Live လှငျ့ပေးနိူငျရပါ့မညျ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အကောငျ့ပိုငျရှငျ ဟုတျမဟုတျ သိခငျြလို့ပါ…
၂ ~~~ အကောငျ့ပိုငျရှငျ လကျတညျးကိုသာ အကောငျ့ပွနျပေးမှာ ဖွဈသောကွောငျ့ဖွဈပါသညျ Tag တှဲပီး Live လှငျ့ပေးတဲ့ အကောငျ့ကိုသာ လြှငျ Cb ကနေ ပွနျလညျး အကောငျ့ပွနျပေးမှာ ဖွဈပါသညျ !!
စညျးကမျးခကျြလေးတှေ လိုကျနာပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံပါသညျ…
မှတျခကျြ ~~~ သူမြား အကောငျ့ရဲ့ Chat box ကို ဝငျကွညျ့တာ ဝါသနာ မပါ…
အေးမွတျသူကို ပွောလိုကျတဲ့ စညျးကမျးခကျြမြား
ဒီလို အကောငျ့အဟကျမခံရခငျမှာ အေးမွတျသူဟာ သင်ျကွနျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ Shayi ဝတျစုံလေးတှနေဲ့ ရိုကျထားတဲ့ ဓာတျပုံလေး တငျခဲ့ပါသေးတယျ။
ဟကျကာတှေ ပွောသလို အေးမွတျသူအနနေဲ့ Live လှငျ့ပွီး ပွနျယူမှာလား မယူဘူးလားဆိုတာတော့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုရမှာပါ။
by Min Than Htike . 8 hours ago